Ihe akara aka nke ndi dike, ihe osise nke agha uku agha Rif | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Chufo Llórens (1931-) enwetala ọnọdụ ya dị ka otu n'ime ndị nnọchi anya ama ama nke akwụkwọ akụkọ Spen site na ikike ya. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, e toro akwụkwọ ya maka izi ezi nke ntọala ha yana data enyere. Ọnọdụ ndị dike (2020), sokwa; otu ugboro, onye ode akwụkwọ Catalan ahụ egosila mmezu nke ezigbo akwụkwọ.
Ọ bụ epic ezinụlọ saga nke na-eme n'etiti ikuku nke ndị Paris Bohemian na ọdịnala Madrid nke iri afọ mbụ nke narị afọ nke iri abụọ. Nke ahụ bụ oge ejiri agha abụọ lụọ agha: Nnukwu Agha ahụ na Europe na Rif War n'etiti ndị Spen na ndị Moroccan. Na mgbakwunye na nke a, atụmatụ aghụghọ, omume, ịhụnanya, ekworo na prevarication gbakọtara na ederede.
1 Nyocha na nchịkọta nke akara aka nke ndị dike
1.1 Fọdụ n'ime ihe omume ndị a gwọrọ na akwụkwọ akụkọ ahụ
1.3 Ebe na oge akụkọ ihe mere eme
1.4 Style na ihe dị iche iche nke akụkọ ihe mere eme na Fate of Heroes
3.1 Akụkụ ọrụ ya
4 Njirimara nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke Chufo Llórens
4.1 Mkpali, mmetụta na ndapụta
4.2 Agha dị ka axis transversal
Nyocha na nchịkọta nke Ọnọdụ ndị dike
Fọdụ n'ime ihe omume ndị a gwọrọ na akwụkwọ akụkọ ahụ
Agha Rif n'etiti Spain na Morocco
Mbata ụgbọ okporo ígwè mbụ na Spain
Ekwentị mbụ pụtara n’ókèala Iberia.
Mmepụta nke okpuru mmiri.
Ndị na-akwado ya bụ José Cervera, onye aristocrat si Madrid na Lucie Lacroze, nwa nwanyị nke nwanyị French. Na mbu, José hụrụ Nachita n'anya, otu nwa nwanyị onye India nke na-agafe isi obodo Spain. N'aka nke ya, Lucie nwere mmasị na Gerhard, onye na-eto eto onye German na-eto eto nke na-achọ ịghọ onye nkuzi.
Otú ọ dị, ajọ mbunobi nke ọha mmadụ na mgbanwe ụfọdụ na-esikwu ike ntinye ọlanarị nke agụụ abụọ ahụ. Ka oge na-aga, nzukọ dị n'etiti José na Lucie kwụsịrị na njikọ nke mmetụta. Ya mere, akụkọ a lekwasịrị anya n'okporo ụzọ nke ụmụ atọ di na nwunye ahụ: Félix Pablo na Nicolás.
Ọdịmma nke ndị dike ...
Ebe na oge akụkọ ihe mere eme
Akwụkwọ ọgụgụ ahụ malitere na 1894, oge nke ịma mma na okpukpe nzuzo nke Spanish bourgeoisie ha gosiri ọdịiche dị n'etiti ịda ogbenye na obi ọjọọ nke klas ndị kacha nwee nsogbu. Ahaghị nhata a bụ isi nke ụfọdụ esemokwu mmekọrịta ọha na eze na izu izu ike.
Ka oge na-aga, ndụ nke ndị otu akụkọ na-agbanwe kwa ụbọchị n'ihi Agha Worldwa Mbụ na Rif War. Ka atụmatụ ahụ na-apụta, ọtụtụ ihe odide ahụ gafere na saịtị tan dị iche iche dị ka Ọzara Sahara, Melilla, Lisbon, Paris na Caracas. Akụkọ a na - ejedebe n'etiti 1920s.
Style na ihe ndị mejupụtara akụkọ ifo na Ọnọdụ ndị dike
Ọnọdụ dị iche iche mesiri nkata nkata ike na mgbanwe nke usoro. Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime Akwụkwọ ụzọ edemede nke akwụkwọ a na-egosi na ntọala ntọala akwụkwọ a kwesịrị ka a mụọ ya. Malite na ntọala ndị a siri ike, Llórens agbapụtawo akụkọ ifo nke nwere ike ijikọ aka na ngalaba ihunanya na amaokwu jupụtara na njem, ọgba aghara na ọgba aghara na ejighị n'aka.
Ọzọkwa, a na-ejikọ mkparịta ụka zuru ezu na-ese ihe osise zuru oke site na mkparịta ụka ndị a na-ekwenye ekwenye, yana mkpụrụokwu oge ahụ. N'ihi ya, ọ bụghị akụkọ ifo, akwụkwọ ahụ yiri ihe akụkọ nke onye ji anya ya hụ ihe mere kwuru. N'ụzọ dị otú a, onye edemede Catalan na-achịkwa iji mee ka ndị na-agụ akwụkwọ na-enyo enyo n'oge ihe karịrị peeji 850 nke akụkọ ahụ na-ekpuchi.
Na weebụsaịtị ederede na saịtị ndị a raara nye akwụkwọ, Ọnọdụ ndị dike ọ nwere akara nke 8/10. Na Amazon, ọkwa kachasị nke 5-kpakpando nyere site na 60% nke ndị ọrụ Internetntanetị; naanị 7% nyere ya ihe na-erughị 3 kpakpando. Tụkwasị na nke a, ndị na-eso ụzọ Chufo Llórens na-arụtụ aka na aha a dị ka ọrụ ya zuru oke ruo ugbu a.
A mụrụ Chufo Llórens na Barcelona na 1931. Tupu ịrara onwe ya nye ide, ọ mụrụ Iwu, ọ bụ ezie na ọtụtụ ọrụ ọrụ ya raara onwe ya nye ịkwalite na imepụta ihe ngosi. Mgbe ịla ezumike nká, na 1986 ọ malitere Onweghi ihe na-eme eve, akwụkwọ edemede ya, Kemgbe ahụ, ọ ọkachamara na ụdị nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme.
Na 2008, Llórens bipụtara M ga-enye gị ala ahụ, akwụkwọ nke ọ raara nye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ise nke ọrụ n'etiti nyocha na ide. Utu aha a ghọrọ ihe mgbanwe na ọrụ edemede ya ekele ya Mpempe akwụkwọ 150.000 vrere n'oge mbu nke mbuputa. E dechara ndepụta nke ọrụ ya site n'akwụkwọ ndị egosiri n'okpuru:
Nke ọzọ bụ ekpenta (1993)
Catalina, onye gbara ọsọ site na Saint Benedict (2001)
Saga nke abụrụ ọnụ (2003)
Oke Osimiri oku (2011)
Iwu nke ndi ezi omume (2015)
Ọnọdụ ndị dike (2020).
Akụkụ ọrụ ya
Ruo taa, Akwụkwọ Chufo Llórens karịrị otu nde e rere, sụgharịrị gaa n'ihe karịrị asụsụ iri na abụọ. Asụsụ ndị ahụ gụnyere: German, Czech, Danish, Finnish, Italian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romania, Serbian, na Swedish. N'ihi nke a, ugwu edeputara ya agabigala oke ala Spain; a na-amata ya na Europe dum.
Njirimara nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke Chufo Llórens
Mkpali, mmetụta na ndapụta
N'ajụjụ ọnụ El País (2008), Llórens kwupụtara na ọganihu nke ụdị a "bilitere n'ihi na ahịa ahụ chọrọ ya. Inye na ọchịchọ bụ nnukwu njikwa nke ihe nwere mmasị na enweghị mmasị, n'oge a ọchịchọ ịmara ihe site n'oge gara aga na-adọrọ ndị na-agụ akwụkwọ ma maka m akwụkwọ akụkọ ihe mere eme bụ ụzọ m ga-esi nweta nnukwu ọganiihu dị ka akụkọ ndụ ma ọ bụ isiokwu ndị ọzọ nke akwụkwọ " .
N'otu aka ahụ, onye edemede Catalan rụtụrụ aka na Alejandro Núñez Alonso dị ka otu n’ime ndị edemede kachasị emetụta ọrụ yama ọ bụ. Ọtụtụ n'ime ọrụ ya ka etinyere na obodo Barcelona, ​​mana nkata ahụ n'ozuzu ya abụghị naanị n'otu obodo. N'ezie, ọtụtụ akụkọ Llórens metụtara akụkụ dị iche iche nke Europe na, n'ikpeazụ, gbasaa na kọntinent ndị ọzọ.
Agha dị ka axis transversal
Ọgba aghara mmekọrịta ọha na eze na ọgba aghara bụ isiokwu ugboro abụọ na akwụkwọ akụkọ Chufo Llórens. N'ebe a na-emegiderịta onwe ya, ihe omimi miri emi na-etolite, nke bụ eziokwu, nke mmadụ, nke ebumnobi ha na esemokwu ha na-achịkwa. N'ezie - ọ nweghị ike ịbụ otu akwụkwọ nke onye edemede Barcelona - edere ya nke ọma ma kọwaa ya nke ọma.
Oge ochie na Barcelona bụ ihe mkpalite mgbe niile maka Llórens n'akwụkwọ ya ndị mbụ. Otu a ka odi Catalina, onye gbara ọsọ site na Saint Benedict, Nke ọzọ bụ ekpenta y Saga nke abụrụ ọnụ. Mgbe ahụ na Iwu nke ndi ezi omume y Ọnọdụ ndị dike Onye edemede nke Catalan lekwasịrị anya na ihe omume neuralgic - na Barcelona - nke ngwụsị XNUMXth na mmalite narị afọ nke XNUMX, n'otu n'otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Ọnọdụ ndị dike